Onye na -emepụta carbide kacha mma na ụlọ nrụpụta | Toonney
Tungsten Carbide nhazi
Mkpanaka Carbide siri ike
Mkpanaka Carbide nwere oghere Coolant
Cement Carbide Die
Ọnwụ na -aga n'ihu/anwụ anwụ
Hexagonal Waya ịbịaru Die
Ngwaọrụ ịcha Carbide
Ụlọ ọrụ Carbide End
Njirimara na -agba ume
Ọkụ na -agba ọkụ HIP
Ngwa ngwaahịa usoro a na -ekpuchi tungsten carbide oghere, mmanya na -agwụ ike carbide, arụ ọrụ carbide, na ụfọdụ ngwaọrụ izizi ndị ọzọ. Toonney Tungsten Carbide Blank Plant, dị ka otu n'ime ndị na -emepụta mmanya na -agwụ ike nke carbide, enwetala aha ọma n'ụlọ na mba ofesi. Ruo afọ ndị a, ọtụtụ ụlọ ọrụ si mba ofesi, nke na -adịgasị iche site na ụlọ ọrụ igwe, ụlọ ọrụ ụgbọ ala, ụlọ ọrụ injinịa na ihe ndị ọzọ, na -aga Toonney Tungsten Carbide Blank Plant maka inweta ngwaọrụ nkenke dị elu, mmanya na -agwụ ike carbide, carbide preforms na ọnụahịa asọmpi.
Tungsten carbide oghere site na Toonney tungsten carbide oghere osisi nwere nha dị iche iche. A na -akpọkwa ụlọ ọrụ Toonney dị ka Tungsten Carbide Blank Boring Bar Factory, nke nwere ike rụpụta mmanya tungsten carbide na -agwụ ike n'ụdị dị iche iche dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Nhazi nke carbide:Ewezuga oghere carbide, Toonney na -emekwa ntọala igwe ọzọ na oghere ma na -enye preform dị iche iche dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Ọdịdị dị ka onye ahịa chọrọ, na akụkụ ya, kọwakwuru ihe achọrọ nke na -eme ka oghere carbide dị nso na ngwaahịa onye ahịa chọrọ ị nweta.
Ụlọ ọrụ Toonney Precision Tools nwere ihe dị ka akara mmụta 50 dị iche iche tungsten carbide nwere obosara, ogologo na ọkpụrụkpụ. Mgbe ahụ na -eji usoro dị iche iche emezu ihe ọ bụla achọrọ pụrụ iche karịa edepụtara (anyị nwere ndepụta nke ngwaọrụ izizi maka ndị ahịa nọ n'okpuru)
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ gbasara oghere tungsten carbide, oghere na -agwụ ike carbide, carbide na -arụ ọrụ na ụfọdụ ngwaọrụ izizi ndị ọzọ.
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: Akpa rọba, wee chekwaa ya na ụfụfụ ụfụfụ, n'ikpeazụ gaa na katọn dị na mpụga.
Ihe nlele dị mkpa:Tungsten carbide oghere nke nwere ike ịdị site na ngwa ahịa anyị na -emekarị, enwere ike ịnye ya dị ka nlele n'efu. Maka ụfọdụ mmanya tungsten carbide na -agwụ ike na mmanya nwere simenti nwere ihe pụrụ iche onye ahịa chọrọ, ga -akwụ ụgwọ. N'ezie, ndị ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ mbupu. Ọtụtụ mgbe, oge izizi nke ihe nlele ga -adị n'ime ụbọchị ọrụ 7
Onu ogugu kacha nta:Enweghi oke ọnụọgụ nke tungsten carbide oghere ma ọ bụ mmanya na -agwụ ike carbide maka usoro ikpe izizi. Mana n'usoro nke abụọ, mkpokọta tungsten carbide oghere na mmanya na -agwụ ike carbide ekwesịghị ịbụ ihe na -erughị 1000USD.
Oge Mbuga ozi: 7-15 ụbọchị ọrụ
Ọkwa Ọkwa ISO Kobalt Nha ọka Njupụta Ekweghị ekwe Ekweghị ekwe MGBE
Enwere ike ịme nkọwapụta dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Product aha: Tungsten carbide oghere/ Carbide na -agwụ ike mmanya
Ebe Mmalite: Fujian, China (Chile)
Aha aha: Toonney
Nọmba nlereanya: TC
Ụdị: Tungsten carbide oghere/ Carbide na -agwụ ike mmanya
Ihe: Tungsten carbide ihe
Ndidi: Dị ka achọrọ.
Ọkwa: TU06, TF06, TU08, TU40, TU40F, TU44, TU25, TU45
Nha: Dị ka achọrọ
Usoro ịkwụ ụgwọ: FOB Xiamen
1. TU06 carbide tungsten oghere (njupụta nke ihe tungsten carbide ihe efu: 14.8; HRA nke ihe tungsten carbide ihe efu: 94)
Kwesịrị ekwesị maka ịme PCB microdrilling, micro milling cutter na ụdị ngwaọrụ siri ike siri ike. Nwere ike ikwu ihe ka -egwe ọka cutter nke Dia. bụ 1.2mm na n'elu.
2. TF06 Tungsten carbide oghere (njupụta nke ihe tungsten carbide oghere ihe: 14.81; HRA nke tungsten carbide ihe efu: 93.1)
Kwesịrị ekwesị maka igbutu aluminom na alloy magnesium, alloy base alloy, allo-iron alloy, plastik, graphite, eriri carbon wdg.
3. TU08 Tungsten carbide oghere (njupụta nke ihe tungsten carbide oghere ihe: 14.52; HRA nke ihe tungsten carbide oghere ihe: 93.5)
Ike dị elu na ekweghị ekwe, dị mma maka ịkpụ ihe acrylic, ihe enyere n'iwu maka ime PCB drill na nnukwu drill nke dia. Ọ bụ 0.7mm na n'elu.
4. TU40 tungsten carbide oghere (njupụta nke ihe oghere tungsten carbide: 14.4; HRA nke ihe tungsten carbide ihe efu: 91.8)
Re-iwu ihe maka akuakuzinwo nkịtị, ọgwụgwụ na nkume igwe nri, karịsịa mma na-egweri na akuakuzinwu nkịtị anwụ ígwè, isi awọ ígwè, Austenit ígwè, na alloy.
5. TU40F carbide Tungsten oghere (njupụta nke ihe tungsten carbide oghere oghere: 14.45; HRA nke ihe tungsten carbide oghere ihe: 92.3)
Ihe enyere n'iwu maka ịme mgbagharị, igwe ihe, wdg, na igwe igwe na igwe nchara, igwe anaghị agba nchara, iron na aluminom nke ike ya dị n'okpuru 50HRC.
6. TU44 Tungsten carbide oghere (njupụta nke ihe tungsten carbide oghere ihe: 14.1; HRA nke ihe tungsten carbide ihe efu: 92.8)
Kwesịrị ekwesị maka ịme ihe nkọwapụta igwe ihe dị iche iche, reamer, agụba, wdg na -arụ ọrụ nke ọma na ịcha ngwa ngwa dị elu dịka ọmụmaatụ n'ịchacha nchara, alloy aluminom, titanium alloy wdg.
7. TU25 Tungsten carbide oghere (njupụta nke ihe tungsten carbide oghere ihe: 14.06; HRA nke ihe tungsten carbide oghere oghere: 92.5)
Ihe maka igwe ihe eji egweri egwu na ihe eji eme ihe maka igwe ihe eji eme ihe nchara, igwe nkedo, igwe anaghị agba nchara.
8. TU45 Tungsten carbide oghere (njupụta nke ihe tungsten carbide oghere ihe: 13.96; HRA nke ihe tungsten carbide oghere ihe: 92.6)
Ihe enyere n'iwu maka ụdị igwe ihe ọ bụla na-ejedebe, reamer, agụba ihe wdg, na-arụ ọrụ nke ọma na mpaghara ịcha ọkụ ọkụ dị elu, dabara nke ọma maka imenyụ nchara, alloy aluminom, titanium alloy wdg.
1. Ogo dị elu: Ihe carbide Tungsten nwere nkọwa dị iche iche: dị iche na oke, na -eyi nguzogide na nguzogide ujo.
2. Ogologo ndụ ọrụ: Ngwongwo nkenke nke Tonney nwere ogologo ndụ ọrụ.
3. Ọnụahịa ndị nrụpụta:Onye nrụpụta ngwaọrụ nrụpụta nke Tonney bụkwa osisi ama ama na -enweghị oghere carbide. Yabụ enwere ụfọdụ amụma na -akwado gọọmentị, mgbe ahụ ndị ahịa nwere ike nweta "ọnụahịa onye nrụpụta".
4. nnyefe ngwa ngwa:Ụlọ ọrụ na -emepụta ihe nkenke nke Tonney nwere ndị ọrụ nhazi ọkachamara yana imepụta nnukwu ihe. Oge nnyefe anyị bụ ụbọchị 7-15.
5. Nchedo gburugburu ebe obibi: ịdị ọcha na -enweghị ihe eji emegharị ya
Nke gara aga: Mkpanaka Carbide
Osote: Ịbịaru Die
Ngwaahịa Tungsten Carbide ahaziri
Xiamen Toonney Tungsten Carbide Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na nyocha, ịzụlite na imepụta ngwaahịa carbide tungsten. Ụlọ ọrụ Toonney dị na Xiamen, obodo gbara osimiri okirikiri na Fujian Province na China, obodo ama ama maka ụlọ nrụpụta carbide tungsten kacha elu.
Adress: No.23, Rixin Road, District Jimei, Xiamen, Fujian, China 361022
Ekwentị: +86 592 7797922
Faksị: +86 592 6771943
Hapụ ozi maka ajụjụ ọ bụla, anyị ga -alaghachikwute gị n'ime awa 24.